Mugabe Under Intense Fire As Cholera Toll Raises To 746 | GroundReport May 21, 2013	Google+
Mugabe Under Intense Fire As Cholera Toll Raises To 746 by Hanson Okoh
December 11, 2008 The death toll from Zimbabwe's cholera epidemic soared to nearly 750, the United Nations said Wednesday, as rights groups denounced President Robert Mugabe over a wave of abductions of activists.
Mugabe, who has ruled Zimbabwe since independence in 1980, has come under a barrage of international pressure to step down, amid a worsening cholera epidemic and a political stalemate after this year's controversial elections.
The increase came despite assurances by Zimbabwe's information minister, who said Tuesday that "the cholera situation is under control."
Zimbabwe is also hammered by the world's highest inflation rate, last estimated in July at 231 million percent, and crippling food shortages that have left nearly half the population in need of aid.
Two days later, Zacharia Nkomo - the brother of a lawyer working on Mukoko's case - was taken from his home in southern Zimbabwe, while two of her colleagues were abducted on Monday at their workplace, the groups said.